देवनारायण बाबुछोरालाई भारतीय प्रहरीद्वारा अपहरण मुद्दा - SINDHULI SAUGAT
SINDHULI SAUGAT NEWS NEWS UPDATE SPECIAL देवनारायण बाबुछोरालाई भारतीय प्रहरीद्वारा अपहरण मुद्दा
देवनारायण बाबुछोरालाई भारतीय प्रहरीद्वारा अपहरण मुद्दा
सिन्धुली सौगात डटकम प्रकाशित समय 12:23 AM
गृहमन्त्रीको रिहाइको पहल गर्न सप्तरीका सीडीओलाई निर्देशन
काठमाडौं , १६ असोज – 'भूमीरक्षक' का रुपमा चिनिएका सप्तरीको तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाका देवनारायण यादव र उनको छोरा अजयलाई प्रहरीले अपहरणको मुद्दा चलाएको छ। देवनारायणका बाबुछोरालार्इ शनिबार भारतीय प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। उनीहरु दुबै जनाविरुद्द अपहरणको मुद्दा चलाएको बताइएको छ।
नेपालको सीमानाका सुनौलीबाट देवनारायणका छोरा पक्राउ परेपछि छुटाउन भनि भएका देवनारायणलार्इ पनि प्रहरीले पक्राउ गरी सुपौल जिल्लाको बीरपुर थानामा राखिएको छ।
तिलाठीबासीले घटनाको विरोध गर्दै देवनारायणका बाबुछोराको रिहार्इको पहल गर्न सरकारस‌ंग माग गरेका छन्। गतबर्ष तिलाठीमा भारतीय पक्षले स्थानीय खाँडो खोलामा बाँध बाध्न आएका बेला नेपालीहरुले प्रतिकार गरेका थिए।
यादवकै नेतृत्वमा तिलाठीबासीले भारतीयको प्रतिकार गर्दै उनीहरुलार्इ लखेटेका थिए। उक्त घटनापछि देवनारायण निकै चर्चामा आएका थिए। उनलार्इ भूमी रक्षक भन्दै प्रशंसा पनि गरिएको थियो। तिलाठीबासीले उक्त घटनाको प्रतिकार गरेकै कारण देवनारायण र उनका छोरालार्इ भारतीय प्रहरीले पक्राउ गरी झुटा मुद्दा चलाएको दावी गरेका छन्।
उता भारतीय प्रहरीले भने देवनारायणका छोरा अजयले भारतीय युवतीसँग भागी विहे गरेको र केटी पक्षले अजय विरुद्द अपहरण गरेको उजुरी गरेका कारण अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरेको जनाएको छ। अजयले हालै भारतीय युवतिसंग भागी विहे गरेका थिए।
देवनारायण पक्राउ परेको घटना यति बेला चर्चामा छ। गृहमन्त्रालयसम्बद्ध स्रोतका अनुसार सरकारले कुटनीतिक आधामार उनको रिहार्इका लागि पहल गरिरहेको छ। देवनारायण र छोरा अजय बिरूद्ध भारतीय प्रहरीले एफआईआर अन्तर्गत कारवाही थालेको हो ।
गृहमन्त्री जनार्दन शर्मा प्रभाकरले सप्तरी तिलाठीका देव नारायण यादव र उनको छोरा अजयलाई भारतीय प्रहरीको नियन्त्रणबाट रिहाईको पहल थाल्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिएका छन् । उनले सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भगिरथ पाण्डेलाई टेलिफोन गरी भारतीय अधिकारीहरुसँग समन्वय गरी यादवद्वयलाई यथाशिघ्र नियन्त्रण मुक्त गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको स्तरबाट रिहाई नभए सरकारले कुटनीतिक पहल सुरु गर्ने गृहमन्त्री शर्माको भनाइ छ ।
मन्त्री शर्माले भने, भारतका प्रहरी प्रशासनसँग समन्वय गरेर जतिसक्दो छिटो रिहा गर्न भनेको छु । यदि त्यसरी भएन भने सरकारले कुटनीतिक पहल सुरु गर्छ ।
प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष, ओली प्रधानमन्त्री र माधव न...
पार्टी एकता होइन, एमालेसँगको विलय होः गोपाल किराती...
एमाले-माओवादी एकताको अध्याय कसरी सम्भव भयो ?
कारको ठक्करले बालिकाको मृत्यु
देउवा सरकार ‘धराप’मा
अमेरिकामा गोली प्रहारबाट 'कम्तीमा २० को मृत्यु'
भीमेश्वरमा क्षमापूजा , प्रसाद राष्ट्रपति कार्यालयम...
कांग्रेसका शीर्ष नेता कहाँबाट चुनाव लड्दैछन् ?
देवनारायण बाबुछोरालाई भारतीय प्रहरीद्वारा अपहरण मु...